डा. केसीबारे नेताहरुको भ्रम – जनस्वास्थ्य खबर
नेता र डा. केसीको जीवनशैली पनि सर्वसाधारणले तुलना गरेर हेर्छन्। केसीको जीवन सरकारी अस्पताल धाउने र दुरदराजका बिरामीमा पूर्ण रुपमा समर्पित छ। उनी कि टिचिङ अस्पताल आउने बिरामी जाँच्दै भेटिन्छन् कि त दुर्गम गाउँमा आपतविपत परेका बिरामी उपचार गरिरहेका हुन्छन्। उनको न घर छ न त परिवार। यस्ता ‘जोगी’ डाक्टरको स्वार्थ आमनागरिकको स्वास्थ्यभन्दा अर्को हुनै सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका छैनन् र? नेताहरुको लगनगाँठो नाफाखोर व्यवसायीहरुसँग छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन र? सार्वजनिक स्वास्थ्यको सवालमा हाम्रो हितको प्रतिनिधित्व नेताहरुले हैन, डा. केसीले गर्छन् भन्नेमा जनतामा कुनै दुबिधा बाँकी छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।